थरिथरिका फेसबुक साथी – Everest Dainik – News from Nepal
थरिथरिका फेसबुक साथी
फेसबुकमा मेरा विभिन्न किसिमका साथी छन् । कोही सकारात्मक सोच भएका छन्, कोही सधै नकरात्मक दृष्टिकोण राख्ने । यी अलावा कोही नेताको भक्तिगान गाउने छन् त कोही केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका । यस्ता व्यवहारका साथी पत्तो लगाउन फेसबुक निकै सजिलो माध्यम बनेको छ ।
मेरो फेसबुकमा सधैं नकरात्मक टिप्पणी गर्ने साथी औधी छन् । उनीहरु जहिले पनि निराशा तथा गाली गर्नमा मात्रै व्यस्त भएका देखिन्छन् । अझै भनुँ उनीहरुले यति काम गर्नका लागि मात्रै फेसबुक खोलेका हुन् । एकथरि साथी अरुलाई गिज्याउन तथा काम प्रभावित गर्नमा व्यस्त छन् । उनीहरु फेसबुक स्टाटसदेखि मेसेस गरेर दिक्क बनाइरहेका छन् । मानौं उनीहरुको दैनिकी नै यसैमा वितिरहेको छ ।
फेसबुक खोल्ने वित्तिकै अनेक आशयका स्टाटस देख्न पाइन्छ । अचेल फेसबुकका कारण गोप्य कुरा जान्न धेरै पर्खिनु पर्दैन । फेसबुक प्रयोगकर्ताबाट चाहिने जति गोप्यता हो त्यो भन्दा अधिक सामग्री चुहिएको हुन्छ । तर, स्वयः प्रयोगकर्ता भने यो बारे अनभिज्ञ जस्तै छन् । यतिमात्रै होइन अहिले फेसबुकका कारण प्रयोगकर्ताको सोच र बानी व्यवहार सजिलै थाहा पाउन सकिने भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांशलाई फेसबुक किन चलाउने र यसका कारण कस्तो असर-प्रभाव परिरहेको छ भन्ने चेत नै छैन ।
अहिले सामाजिक संजाल फेसबुक सशक्त सन्देश प्रवाह गर्ने माध्यम बनेको छ । तर, कहीँकहीँ यसको दूरुपयोग पनि भइरहेको छ । फेसबुकका कारण कतिका घर भाँडिएका छन् । भने, कत्तिको ज्यान लिने-दिने कार्य भइरहेको छ । फेसबुक कसैलाई निकै दिर्घकालिन रोग भएको छ । यो सबै यसको सही सदूपयोग हुन नसकेर हो । कहिलेकाही फेसबुककै दूरुपयोगका कारण अपहरणमा परेका घटना पनि सुन्न पाइन्छन् । यतिमात्रै होइन फेसबुककै कारण विभिन्न लालच देखाएर मानव बेचविखनका घटना पनि बढिरहेका छन् ।
सामाजिक संजालमा नराम्रो सामग्री पोष्ट गरेमा छिट्टै भाइरल हुन्छ । तर, सकारात्मक कुरा पोष्ट गर्यो भने त्यो निकै कमजोर सावित हुन्छ । सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताको मन नै बढी जसो गलत दिशामा उन्मुख भइरहेको छ । मानौं फेसबुक मार्फत कुनै सहयोगको याचना माग्नुहोस् कमै प्रतिक्रिया आउँछ । तर, कुनै प्रयोग नै नहुने सामग्री पोष्ट गर्नुहोस् त्यो निमेष भरमै भाइरल हुन्छ । आखिर किन त यस्तो ? जफाव स्पष्ट छ– सोच गलत कार्यमा मात्र बढी गइरहेको छ । सकारात्मक र सहि काम अनुमोदन गरौं भन्ने भावनाको खडेरी परिरहेको छ । नकारात्मकताले हिंसा निम्त्याउँछ, गलत कार्यमा अगाडी बढ्न प्रोत्साहन गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
फेसबुकको सकरात्मक पक्ष पनि छन् । तर, ती नकारात्मक भन्दा गौण छन् । फेसबुकको सही सदूपयोग गर्ने हो भने यसबाट अनेकौं फाइदा लिन सकिन्छ । कुनै जानकारी पाउन धेरै कुर्नुपर्ने सूचना क्षणभरमै पाउँन सकिन्छ । जस्तो कि, थोरै लागतमा सजिलै कुराकानी आदानप्रदान गर्न पाइन्छ । तर फाइदा भन्दा बेफाइदा बढिरहेका छन् । जस्तो कि, फेसबुकको दूरुपयोगका कारणले विभिन्न हिंसा बढ्दै गएका छन् । जे पनि पोष्ट गर्न पाइने भए पछि फेसबुक पिडितको संख्या झनै बढ्दो छ । जथाभावी सामग्री पोष्ट गर्दा कयौं व्यक्तिको चरित्र हत्या भएको छ । तर, यसको नियन्त्रणका लागि दरिलो कानून बन्न सकेको छैन ।
अहिले सबैको पहिलो आवश्यकता फेसबुक नै बन्न पुगेको छ । दुई–तीन कक्षा पढ्ने साना नानीले पनि फेसबुक अकाउन्ट खोलेको देखिन्छ । उनीहरु पनि फेसबुकमै रमेका देखिन्छन। सिर्जनात्मक काममा बढी समय दिनुपर्ने बेला अधिकांश व्यक्ति फेसबुकमै रमेका दृष्य देखिन्छन् । यात्रा, चियानास्ता गर्दा, साथीसंग गफिदा, शिक्षकले पढाइ रहँदा, अब हुँदाहुँदा शौच तथा दिसा गर्न शौचालय बस्दा पनि फेसबुक नै चलाएका दृश्य प्रशस्तै देख्न सकिन्छ ।
धेरैलाई फेसबुकले गहिरो लत बसालेको छ । अहिले धेरै जसो व्यक्तिलाई एक घण्टा पनि फेसबुक लगआउट गरेर बस्न साह्रै गाह्रो हुन्छ । एक घण्टाको समयमा आफूले पोष्ट गरेको सामग्रीमा कति लाइक तथा कमेन्ट आयो भनेर मनमा निकै खुल्दुली मच्चीन्छ । आजभोली फेसबुक साथी, परिवार, इष्टमित्र तथा प्रियजनभन्दा प्यारो भएको छ । फेसबुक चलाउन पाए भइग्यो, अरु केही नचाहिने !
अस्पताल, होटल, क्याम्पस वाइफाइ विना संचालन गर्न गाह्रो भएको छ । अरु कुरा लेखाजोखा भन्दा पनि पहिले वाइफाइ जडान छकि छैन भन्दै सोधपुछ हुन्छ । एक हाफ नास्ता खान अहिले कम्तीमा आधी घन्टा लाग्ने गरेको छ । किनभने फेसबुक चलाउँदै नास्ता खानु पर्यो नि !
कुनै ठाउँ जानुपर्यो भने त्यो भन्दा पहिले यता जादैछु भनेर ठेगाना सार्वजनिक गरिन्छ । जसले गर्दा विभिन्न रिस साध्ने व्यक्तिको फेला सजिलै परिन्छ । यसले गर्दा, विभिन्न घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । प्रायः हामी फेसबुकमा सत्य बोल्छौं । म यता छु, यस्तो गर्दैछु, यो खाने छु लगायतका कुरा पहिले नै सबैलाई जानकारी गराउँछौं । यसले गर्दा, विभिन्न खतरा मोल्नु परेको अवस्था पनि धेरै व्यक्तिलाई आएको हुनु पर्छ । हुने कार्यबारे अगाडी नै खुलासा गरेपछि विभिन्न अवरोध सिर्जना हुने गर्दछन् । त्यस कारण यस्ता कुरामा सबै फेबसुक प्रयोगकर्ता सर्तक हुन जरुरी देखिन्छ ।
फेसबुकमा बनेका आधा साथीसंग भेट भएको छैन । उनीहरुमध्ये अधिकांशसंग हेलो हाइसम्म पनि भएको छैन । तर, उनीहरु साथी नै भनेर फ्रेण्ड लिष्ट मै छन् । यीमध्ये कोही अन्धाधुन्ध बनेका साथी पनि हुन् । परिचित सबै साथीसंग पनि त्यति धेरै कुराकानी हुँदैन । कुराकानी हुने सीमित साथी छन् । उनीहरुसँग पनि त्यति गहिरो कुराकानी हुन्न । त्यही हाइ हेलो मात्रै हुन्छ । मसँग जोडिएका साथीहरुले पोष्ट गरेका सामग्री नजिकबाट हेरि रहेको हुन्छ । मूल्यांकन गर्दा लाग्छ कसैले पोष्ट गरेका सामग्री महत्वपूर्ण छन् भने कसैका बिना काममा। त्यसैले फेसबुकको सहि सदूपयोग गर्न सकेमा धेरै फाइदा छ । तर, चलाउन नजान्नेको भने सार्वजनिक बेइज्जत भएको देखिन्छ ।